JPEG နဲ့ PNG ဘယ် format နဲ့ပုံတွေကို save လုပ်သင့်လဲ?? – DigitalTimes.com.mm
155 Shares 619 Views
JPEG နဲ့ PNG ဘယ် format နဲ့ပုံတွေကို save လုပ်သင့်လဲ??
ဒီဂျစ်တယ်ပိုင်းမှာတော့ ပုံတွေကိုသိမ်းနိုင်တဲ့ format က JPEG (JPG) နဲ့ PNG ဆိုပြီး ၂ခုရှိပါတယ်။ ပုံတစ်ပုံတည်းကို format ၂မျိုးနဲ့သိမ်းပြီးတဲ့အခါ ပထမတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ လုံးဝထပ်တူကျနေတယ်လို့ထင်ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်အနီးကပ်သေချာကြည့်တဲ့အခါ ပုံ၂ပုံမှာကွာခြားချက်တွေရှိပါတယ်။ format တစ်ခုချင်းစီရဲ့အားသာချက် အားနည်းချက်တွေကိုလိုက်ပြီး သုံးရမယ့်နေရာတွေလည်းကွာသွားပါတယ်။ ခြားနားချက်ကိုကောင်းကောင်းနားလည်နိုင်အောင်လို့ ဘယ် format ကိုတော့ ဘယ်အချိန်မှာသုံးသင့်တယ်ဆိုတာလေးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
JPEG ရဲ့အရှည်ကတော့ Joint Photographic Experts Group ဖြစ်ပြီး ဒီ format ကိုထွင်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့နာမည်ပါ။ ဒီဂျစ်တယ်ဓာတ်ပုံပညာမှာရော အွန်လိုင်းဓာတ်ပုံတွေမျှဝေတဲ့အခါမှာပါ ပုံရဲ့ဖိုင်ဆိုဒ်နဲ့ ရုပ်ပုံအရည်အသွေးကို ဂရုတစိုက်ထိန်းညှိပေးနိုင်တဲ့အတွက် ဒီ JPEG format က စံနှုန်းတစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်လာပါတယ်။
သုံးတဲ့ပရိုဂရမ်နဲ့ setting ကိုလိုက်ပြီး အချိုးတွေကွဲပြားနိုင်ပေမယ့်လည်း စံသတ်မှတ်ထားတဲ့ JPED image ရဲ့compression အချိုးက 10:1 ပါ။ ဆိုလိုတာက 10MB ရှိတဲ့ပုံတစ်ပုံကို JPEG format အနေနဲ့သိမ်းလိုက်ရင် 1MB ပဲရှိတော့တာမျိုးပါ။ ပုံရဲ့အရည်အသွေးကတော့ ပါဝင်တဲ့ content တွေပေါ်မူတည်နေပေမယ့်လည်း ပုံမှန်ကတော့ အရည်အသွေးလုံးဝကျမသွားပါဘူး။
ဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက် သင်္ချာနည်းလမ်းတစ်ခုကိုသုံးထားတာဖြစ်ပြီး ဒီပုံချုံ့တဲ့ algorithm က ပုံတစ်ပုံလုံးကိုခြုံကြည့် ပုံမှာပါတဲ့ဘယ် pixel ကတော့ သူ့ဘေးကဘယ် pixel နဲ့ညီလဲဆိုတာကြည့် ပြီးမှ pixel တွေကိုပြန်ပေါင်း ဒီလိုလုပ်ပါတယ်။ နည်းနည်းတော့ရှုပ်ထွေးလွန်းပါတယ်။ အသုံးဝင်ပေမယ့်လည်း တစ်ခုရှိတာက ပုံကိုသိမ်းပြီးတဲ့အခါမှ လျှော့ချလိုက်တဲ့ဒေတာတွေကိုပြန်မရတော့ပါဘူး။ ဆိုလိုတာက 1MB နဲ့သိမ်းလိုက်ပြီး 10MB ကိုပြန်လိုချင်လို့မရတဲ့သဘောပါ။ ဒါကြောင့် ဓာတ်ပုံကော်ပီကနေ ဓာတ်ပုံကော်ပီပြန်ကူးရသလိုမျိုးဖြစ်နေပြီး တစ်ခါ save တိုင်းအရင်ထက်နည်းနည်းပိုပိုဆိုးလာပါတယ်။
ဒါကြောင့် archive လုပ်ရမယ့်ပုံမျိုးတွေဆိုရင်တော့ JPEG format ကိုမသုံးဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။ archive လုပ်ပြီး ပုံကိဖွင့်ပြီး edit လုပ်တာနဲ့ ပုံရဲ့ အရည်အသွေးလျော့ပါပြီ။ နောက်တစ်ခုက စာတွေအများကြီးပါတဲ့ပုံတွေ ပါးလွှာတဲ့လိုင်းလေးတွေပါတဲ့သရုပ်ပြပုံတွေဆိုရင်တော့ JPEG format ကိုရှောင်စေချင်ပါတယ်။ လိုင်းတွေကဝါးသွားတတ်တဲ့အတွက် ပုံရဲ့ရုပ်ထွက်ညံ့သွားပါလိမ့်မယ်။ အောက်မှာပြထားတဲ့ပုံမှာဆို ညာဘက် JPEG format ကအဖြူနောက်ခံနဲ့စာတွေက ဘယ်ဘက်က PNG နဲ့ယှဉ်လိုက်ရင်ဝါးနေတာကိုတွေ့မှာပါ။
တစ်ခါတစ်လေကျရင် PDF တွေကနေ JPEG format ကိုပြောင်းရတဲ့အခါမျိုးမှာ အရည်အသွေးလည်းမကျစေမယ့်ပမာဏလောက်နဲ့ချုံ့တာကောင်းပါတယ။် ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ HEIF ဆိုတဲ့ format နဲ့အစားထိုးလာကြပြီး ဒီ HEIF ကိုတော့ Apple က iOS 11 မှာစမိတ်ဆက်ခဲ့တာပါ။
သူကတော့ Portable Network Graphic ရဲ့အတိုကောက်ဖြစ်ပြီး JPEG နဲ့မတူတာကတော့ ချုံ့တဲ့နည်းလမ်းပဲကွာသွားတာပါ။ JPEG ထက် PNG တွေက ပိုသာတဲ့အချက်က ဖိုင်ဆိုဒ်ချုံ့တဲ့အခါ တစ်ခါဖွင့်တစ်ခါ save တိုင်းလည်း အရည်အသွေးကျမသွားတာပါ။ သူလည်း အသေးစိတ်ကျပြီး အရမ်း contrast မြင့်တဲ့ပုံတွေကိုကောင်းကောင်းပြနိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ် PNG ကထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့ feature တစ်ခုကတော့ transparency ပါ။ အထူးသဖြင့်ကတော့ PNG ကို logo တွေဖန်တီးတဲ့အခါမှာသုံးလို့ကောင်းပါတယ်။
PNG ကို web တွေအတွက်သုံးကြတာများပါတယ်။ ပုံအများစုက JPEG နဲ့ပဲဖြစ်ပေမယ့် JPEG နဲ့မရတဲ့ပုံမျိုးဆိုရင် PNG ကပဲထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှာပါ။ PNG တွေမှာလည်း နည်းနည်းပြောင်းလဲလာတာတွေရှိပြီး GIF တွေရဲ့ function အတိုင်းလုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ format ဖြစ်နေဆဲပါပဲ။
ဒါဆို ဘယ် format က ပိုကောင်းသလဲ?
၂ခုလုံးကတော့ တခြား format တွေထက်ပိုကောင်းပါတယ်။ ကိုယ်ဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတာကိုလိုက်ပြီးကိုယ်ရွေးရမယ့် format က ပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်။
ကိုယ့်ကင်မရာကပုံကို Instagram, Twiter ဒါတွေမှာတင်ချင်တယ်ဆိုရင် JPEG ကိုသုံးတာအကောင်းဆုံးပါပဲ။ ဖိုင်ဆိုဒ်လည်းပိုသေးပြီး ဓာတ်ပုံတွေမှာလည်းသုံး platform တော်တော်များများကလည်း ထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့ format တစ်မျိုးပါ။
ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်က screenshot ရိုက်ထားပြီး နောက်မှ အဲ့ပုံကိုထပ်ပြင်ချင်တယ်ဆိုရင် PNG ကိုသုံးတာပိုကောင်းပါတယ။် JPEG နဲ့ယှဉ်လိုက်ရင် ဖိုင်ဆိုဒ်ပိုကြီးနိုင်ပေမယ့် ပုံရဲ့အရည်အသွေးကျသွားမှာကိုတော့ လုံးဝစိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။ နောက်ဆုံးဖွင့်တဲ့အချိန်ထိကို pixel တစ်ခုချင်းစီတိုင်းက ဝါးမနေဘဲ တောက်ပနေမှာပါ။ logo တွေလိုမျိုး web graphic အများစုကတော့ transparent ရတဲ့ PNG တွေကိုသုံးတာများပါတယ်။
ဒီဂဈြတယျပိုငျးမှာတော့ ပုံတှကေိုသိမျးနိုငျတဲ့ format က JPEG (JPG) နဲ့ PNG ဆိုပွီး ၂ခုရှိပါတယျ။ ပုံတဈပုံတညျးကို format ၂မြိုးနဲ့သိမျးပွီးတဲ့အခါ ပထမတဈခကျြကွညျ့လိုကျရငျတော့ လုံးဝထပျတူကနြတေယျလို့ထငျရပါလိမျ့မယျ။ ဒါပမေယျ့အနီးကပျသခြောကွညျ့တဲ့အခါ ပုံ၂ပုံမှာကှာခွားခကျြတှရှေိပါတယျ။ format တဈခုခငျြးစီရဲ့အားသာခကျြ အားနညျးခကျြတှကေိုလိုကျပွီး သုံးရမယျ့နရောတှလေညျးကှာသှားပါတယျ။ ခွားနားခကျြကိုကောငျးကောငျးနားလညျနိုငျအောငျလို့ ဘယျ format ကိုတော့ ဘယျအခြိနျမှာသုံးသငျ့တယျဆိုတာလေးကို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
JPEG ရဲ့အရှညျကတော့ Joint Photographic Experts Group ဖွဈပွီး ဒီ format ကိုထှငျခဲ့တဲ့အဖှဲ့နာမညျပါ။ ဒီဂဈြတယျဓာတျပုံပညာမှာရော အှနျလိုငျးဓာတျပုံတှမြှေဝတေဲ့အခါမှာပါ ပုံရဲ့ဖိုငျဆိုဒျနဲ့ ရုပျပုံအရညျအသှေးကို ဂရုတစိုကျထိနျးညှိပေးနိုငျတဲ့အတှကျ ဒီ JPEG format က စံနှုနျးတဈခုအနနေဲ့ဖွဈလာပါတယျ။
သုံးတဲ့ပရိုဂရမျနဲ့ setting ကိုလိုကျပွီး အခြိုးတှကှေဲပွားနိုငျပမေယျ့လညျး စံသတျမှတျထားတဲ့ JPED image ရဲ့compression အခြိုးက 10:1 ပါ။ ဆိုလိုတာက 10MB ရှိတဲ့ပုံတဈပုံကို JPEG format အနနေဲ့သိမျးလိုကျရငျ 1MB ပဲရှိတော့တာမြိုးပါ။ ပုံရဲ့အရညျအသှေးကတော့ ပါဝငျတဲ့ content တှပေျေါမူတညျနပေမေယျ့လညျး ပုံမှနျကတော့ အရညျအသှေးလုံးဝကမြသှားပါဘူး။
ဒီလိုလုပျဖို့အတှကျ သခငြ်္ာနညျးလမျးတဈခုကိုသုံးထားတာဖွဈပွီး ဒီပုံခြုံ့တဲ့ algorithm က ပုံတဈပုံလုံးကိုခွုံကွညျ့ ပုံမှာပါတဲ့ဘယျ pixel ကတော့ သူ့ဘေးကဘယျ pixel နဲ့ညီလဲဆိုတာကွညျ့ ပွီးမှ pixel တှကေိုပွနျပေါငျး ဒီလိုလုပျပါတယျ။ နညျးနညျးတော့ရှုပျထှေးလှနျးပါတယျ။ အသုံးဝငျပမေယျ့လညျး တဈခုရှိတာက ပုံကိုသိမျးပွီးတဲ့အခါမှ လြှော့ခလြိုကျတဲ့ဒတောတှကေိုပွနျမရတော့ပါဘူး။ ဆိုလိုတာက 1MB နဲ့သိမျးလိုကျပွီး 10MB ကိုပွနျလိုခငျြလို့မရတဲ့သဘောပါ။ ဒါကွောငျ့ ဓာတျပုံကျောပီကနေ ဓာတျပုံကျောပီပွနျကူးရသလိုမြိုးဖွဈနပွေီး တဈခါ save တိုငျးအရငျထကျနညျးနညျးပိုပိုဆိုးလာပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ archive လုပျရမယျ့ပုံမြိုးတှဆေိုရငျတော့ JPEG format ကိုမသုံးဖို့အကွံပေးခငျြပါတယျ။ archive လုပျပွီး ပုံကိဖှငျ့ပွီး edit လုပျတာနဲ့ ပုံရဲ့ အရညျအသှေးလြော့ပါပွီ။ နောကျတဈခုက စာတှအေမြားကွီးပါတဲ့ပုံတှေ ပါးလှာတဲ့လိုငျးလေးတှပေါတဲ့သရုပျပွပုံတှဆေိုရငျတော့ JPEG format ကိုရှောငျစခေငျြပါတယျ။ လိုငျးတှကေဝါးသှားတတျတဲ့အတှကျ ပုံရဲ့ရုပျထှကျညံ့သှားပါလိမျ့မယျ။ အောကျမှာပွထားတဲ့ပုံမှာဆို ညာဘကျ JPEG format ကအဖွူနောကျခံနဲ့စာတှကေ ဘယျဘကျက PNG နဲ့ယှဉျလိုကျရငျဝါးနတောကိုတှမှေ့ာပါ။
တဈခါတဈလကေရြငျ PDF တှကေနေ JPEG format ကိုပွောငျးရတဲ့အခါမြိုးမှာ အရညျအသှေးလညျးမကစြမေယျ့ပမာဏလောကျနဲ့ခြုံ့တာကောငျးပါတယ။ျ ခုနောကျပိုငျးမှာတော့ HEIF ဆိုတဲ့ format နဲ့အစားထိုးလာကွပွီး ဒီ HEIF ကိုတော့ Apple က iOS 11 မှာစမိတျဆကျခဲ့တာပါ။
သူကတော့ Portable Network Graphic ရဲ့အတိုကောကျဖွဈပွီး JPEG နဲ့မတူတာကတော့ ခြုံ့တဲ့နညျးလမျးပဲကှာသှားတာပါ။ JPEG ထကျ PNG တှကေ ပိုသာတဲ့အခကျြက ဖိုငျဆိုဒျခြုံ့တဲ့အခါ တဈခါဖှငျ့တဈခါ save တိုငျးလညျး အရညျအသှေးကမြသှားတာပါ။ သူလညျး အသေးစိတျကပြွီး အရမျး contrast မွငျ့တဲ့ပုံတှကေိုကောငျးကောငျးပွနိုငျပါတယျ။နောကျထပျ PNG ကထောကျပံ့ပေးနိုငျတဲ့ feature တဈခုကတော့ transparency ပါ။ အထူးသဖွငျ့ကတော့ PNG ကို logo တှဖေနျတီးတဲ့အခါမှာသုံးလို့ကောငျးပါတယျ။
PNG ကို web တှအေတှကျသုံးကွတာမြားပါတယျ။ ပုံအမြားစုက JPEG နဲ့ပဲဖွဈပမေယျ့ JPEG နဲ့မရတဲ့ပုံမြိုးဆိုရငျ PNG ကပဲထောကျပံ့ပေးနိုငျမှာပါ။ PNG တှမှောလညျး နညျးနညျးပွောငျးလဲလာတာတှရှေိပွီး GIF တှရေဲ့ function အတိုငျးလုပျဆောငျပေးနိုငျတဲ့ format ဖွဈနဆေဲပါပဲ။
ဒါဆို ဘယျ format က ပိုကောငျးသလဲ?
၂ခုလုံးကတော့ တခွား format တှထေကျပိုကောငျးပါတယျ။ ကိုယျဘာလုပျခငျြလဲဆိုတာကိုလိုကျပွီးကိုယျရှေးရမယျ့ format က ပွောငျးသှားပါလိမျ့မယျ။
ကိုယျ့ကငျမရာကပုံကို Instagram, Twiter ဒါတှမှောတငျခငျြတယျဆိုရငျ JPEG ကိုသုံးတာအကောငျးဆုံးပါပဲ။ ဖိုငျဆိုဒျလညျးပိုသေးပွီး ဓာတျပုံတှမှောလညျးသုံး platform တျောတျောမြားမြားကလညျး ထောကျပံ့ပေးနိုငျတဲ့ format တဈမြိုးပါ။
ဒါမှမဟုတျ ကိုယျက screenshot ရိုကျထားပွီး နောကျမှ အဲ့ပုံကိုထပျပွငျခငျြတယျဆိုရငျ PNG ကိုသုံးတာပိုကောငျးပါတယ။ျ JPEG နဲ့ယှဉျလိုကျရငျ ဖိုငျဆိုဒျပိုကွီးနိုငျပမေယျ့ ပုံရဲ့အရညျအသှေးကသြှားမှာကိုတော့ လုံးဝစိတျပူစရာမလိုပါဘူး။ နောကျဆုံးဖှငျ့တဲ့အခြိနျထိကို pixel တဈခုခငျြးစီတိုငျးက ဝါးမနဘေဲ တောကျပနမှောပါ။ logo တှလေိုမြိုး web graphic အမြားစုကတော့ transparent ရတဲ့ PNG တှကေိုသုံးတာမြားပါတယျ။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်ပဏာမကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကွန်ရက်၁၇ခုတည်ထောင်ရန် အူရီဒူးမှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃.၂ သန်းပံပိုးပေးခဲ့